Echiche iji megharịa: echiche kachasị mma ịmegharị n'ụlọ | Green Renewables
Portillo nke German | 04/05/2022 12:00 | Nzughari
Site n'ijigharị ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị, na mgbakwunye na ịchekwa ego na inye aka mbụ na nke ahaziri iche n'ụlọ anyị, anyị nwere ike ibelata ihe mkpofu ma na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi. Enwere otutu echiche iji megharịa n'ụlọ na inwe ike inye ndụ nke abụọ n'ihe na-adịghịzi arụ ọrụ dịka a kara aka na ọ ga-abụ ihe efu.
N'isiokwu a, anyị ga-enye gị ụfọdụ n'ime echiche kacha mma iji megharịa n'ụlọ.
1 Mkpa nke imegharị ihe n'ụlọ
2 Echiche maka imegharị ihe
2.1 Kalama plastik dị ka ite ifuru
2.2 Akpa maka onyinye na akwụkwọ nri
2.3 ite nwere karama
2.4 Iko yogọt iko dị ka ihe njide kandụl
2.5 Megharịa balloon ekpopụrụ ọkụ
2.6 Mgbaaka karama plastik
2.7 Oriọna na ngaji plastik
2.8 Onye nhazi na tubes kaadiboodu
2.9 foto etiti na ite
2.10 Anụmanụ nwere okpu soda
2.11 Akwa akwụkwọ
2.12 Kandụl eji achọ mma na nkwụsị
2.13 Hanger nwere ngwá ọrụ ochie
2.14 oriọna nwere bọlbụ ochie
2.15 Igbe ọla na karama plastik
Mkpa nke imegharị ihe n'ụlọ
Àgwà nke imegharị ihe aghọwo ihe dị mkpa n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Nke a egosila na ọ bụ ụzọ kacha mma isi belata oke mkpofu na-emerụ gburugburu ebe obibi. Ọ bụ ezie na ịzụ ahịa emewo ka ọrụ a sie ike, ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpebikwa iji ụfọdụ akụkụ nke ụlọ ha. Ọ bụ ezie na ọtụtụ nwere ike iyi ihe na-abaghị uru, e nwere ụfọdụ aghụghọ na echiche ị nwere ike iji zere inwe ịtụfu ha.
Uru ndị dị n'imegharị ihe okike bụ otu ihe ahụ na nke imegharịgharị omenala: ilekọta gburugburu ebe obibi, ibelata mmetọ, ibelata ikuku ikuku, ichekwa ihe ndị sitere n'okike na, nke kachasị mkpa, ịzụlite àgwà oriri nke ọma.
Otú ọ dị, ụdị imegharị ihe a na-enye anyị uru bara uru: ọ na-enyere anyị aka ịkwalite mmepụta ihe na-eme ka anyị nwee ike ịchọ ngwọta kwa ụbọchị na ihe, ihe na ngwaahịa ndị anyị nwere n'aka.
Ọ bụghị naanị maka nhazi na ijikwa ọzọ, Isi uru dị n'imegharị ihe okike bụ ịmara ka anyị ga-esi were ihe anyị nwere wee nye ya nke abụọ ma ọ bụ ọbụna usoro ndụ nke atọ, si otú a na-eme ka usoro oriri dị mkpa.
Ụzọ magburu onwe ya isi soro ezinụlọ gị nọrọ oge agaghị echefu echefu wee nye ndụ ngwaahịa ndị ị na-adịghịzi eji bụ site n'ichegharị ihe. Na mgbakwunye na echiche anyị na-enye gị na post a, ị nwekwara ike lelee ntuziaka N'onwe Gị ebe ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke otu esi eme nka dị ịtụnanya.
Kalama plastik dị ka ite ifuru
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịmepụta ogige ime obodo, ị nwere ike izere ịzụrụ ite ma tinye aka na nri kwesịrị ekwesị site na iji karama plastik efu. Site na onye na-egbu osisi, ị nwere ike belata ha na ọkara, mee obere ịkpụ n'okpuru ala iji kpoo mmiri ahụ, ma jupụta ha na ala ka ị nwee ike ịkụ ihe masịrị gị. Ọzọkwa, ogige ime obodo bụ ụzọ dị mma isi na-eto nri nke gị ma malite ọrụ nke ga-enyere ọ bụghị naanị gburugburu ebe obibi, kamakwa uche na ahụ.
Akpa maka onyinye na akwụkwọ nri
Echiche a na-enye gị ohere ịchekwa ohere ma mee ka ngwaahịa ndị a dị ọhụrụ ogologo oge. dị ka? Jiri karama rọba, dị ka ihe ọṅụṅụ dị nro, wee webata osikapa, chickpeas ma ọ bụ pasta ka ha dị. Site na agba nke mmiri, ị nwere ike chọọ ha mma n'èzí maka ọrụ mmepụta ihe ma chọpụta ha na akara na-adịgide adịgide ka ị mara ihe ha nọ.
ite nwere karama
Nke a bụ ụzọ ochie nke imepụtagharị karama iko. Ị nwere ike ịse ha na vases mara mma ma chọọ ụlọ gị mma n'ụzọ mbụ.
Iko yogọt iko dị ka ihe njide kandụl
Otu ọrụ nke iko ndị a nwere ike ịbụ iji mee ihe dị ka etiti. Naanị ị ga-asacha ha ma tinye kandụl n'elu ha ka ọkụ na-enwu n'ime ụlọ ahụ dum.
Megharịa balloon ekpopụrụ ọkụ
A na-edobe bọọlụ ndị gbajiri agbawa n'akụkụ n'ihi na ha anaghịzi eme ihe e bu n'obi kee ha. Otú ọ dị, n'ihi ihe ndị e ji eme ha. Enwere ike iji ha mee akpa egwuregwu na-atọ ụtọ.
Mgbaaka karama plastik
Anyị na-enye gị echiche ka ị ghara ịtụfu mmiri karama ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ dị nro. Bee ya n'ime iberibe ma jiri eriri akwa mee ha ọla aka mara mma.
Oriọna na ngaji plastik
Enwere ike iji ngaji ndị a na-atụfu ihe fọdụrụ n'ememe ahụ dị ka ndị na-ejide oriọna, bepụ ọkara nke ala. jiri gluu dị mkpa ma tinye usoro n'usoro na drum ma ọ bụ karama mmiri.
Onye nhazi na tubes kaadiboodu
Enwere ike iji tubes akwụkwọ mposi kaadiboodu na ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya mee ndị nhazi eriri. Enwere ike iji ha hazie etemeete, pensụl na ihe ndị ọzọ. Tinye ọtụtụ n'ime igbe kaadiboodu wee jiri nke ọ bụla dị ka ihe nkewa maka ihe ndị a kwuru. Ọ dị mfe ime.
foto etiti na ite
Ọ mejupụtara itinye foto na ite iko. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ejupụta ya na nnukwu mmanụ.
Anụmanụ nwere okpu soda
N'ihi ọdịdị ha, mkpuchi soda dị mma maka ịmepụta ụmụaka. Dịka ọmụmaatụ, site na ijikọta ha na kaadiboodu, ị nwere ike ịme ụmụ anụmanụ mara mma iji chọọ mma. Nhọrọ ọzọ dị mma bụ ịrapara ha n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ friji nwere magnet. Ị ga-enwe ntụrụndụ dị mfe ma dị ụtọ.
Ndị hụrụ akwụkwọ n'anya na-akpakọbakarị akwụkwọ ndị ha na-agaghị ejizi eme ihe ọzọ. Kama ịtụfu ha, anyị nwere ike imegharị ha ma mee shelf a mara mma. N'ụzọ nke a, anyị na-emepụta mmetụta anya dị ịtụnanya. Ụtụ nke akwụkwọ mbụ nke ga-eme ka onye ọ bụla na-eleta anyị ghara ikwu okwu.
Kandụl eji achọ mma na nkwụsị
Enwere ike ịtụgharị Corks sitere na ụdị ihe ọ drinksụ drinksụ dị iche iche ka ọ bụrụ obere kandụl ịchọ mma n'ime ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ. Na mgbakwunye, ha dị nnọọ mfe ime. Jupụta ha na wax. tinye ha n'obere wick ka ha zuru ike. Otú ọ dị, kpachara anya mgbe nile ka ha apụghị ọkụ ihe ọ bụla gbara ha gburugburu.
Hanger nwere ngwá ọrụ ochie
Ngwa ndị a ga-enyere anyị aka mgbe ụfọdụ ọrụ n'ụlọ. Otú ọ dị, ụfọdụ emeela agadi nke na anyị ejirila nkà na ụzụ dochie ha. Ka ị ghara imefusị ha, tụgharịa ha ma tinye ha n'elu osisi ka ị nweta hanger. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta ihe ịchọ mma bara uru na nke rustic.
oriọna nwere bọlbụ ochie
N'ihi iko ya dị mma, bọlbụ ahụ nwere mmetụ mara mma ma dị mma maka ịchọ mma. Maka mmalite, ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ ochie, wepụ ha n'elu, jupụta mmanụ ma ọ bụ mmiri ma tinye wick n'elu ha.
Igbe ọla na karama plastik
Ụdị ifuru dị na ala nke ọtụtụ karama rọba enwere ike iji mee igbe ịchọ mma ọtụtụ oyi akwa.
Enwere m olile anya na site na echiche ndị a iji megharịa, ị nwere ike inye onyinye nke ájá maka nchekwa na nlekọta gburugburu ebe obibi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Echiche maka imegharị ihe